မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: November 2010
Aung San Suu Kyi talk Foreign Policy
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ မိသားစုဝင်များနဲ့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဗဟန်းမြို့နယ် ပဏ္ဍိတာရာမ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ပြုလုပ်သည့် ဘူးသီးတောင်ထောင်တွင် နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဌေးကြွယ်၏ မိခင် ကွယ်လွန်သည့် သုံးနှစ်ပြည့် နှစ်လည်ဆွမ်းကျွေး တရားနာပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်စဉ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Mr Htay Tint at 6:55 AM0comments
Khin Nyunt video
ဦးခင်ညွန့် နဲ့ သူ့ မိန်းမ တိုင်းပြည်အပေါ် ယုတ်မာခဲ့တာလူတွေ မသိလိုက်ဖူး ။ စစ်ဗိုလ်လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေက သေမလောက်ကြောက်ခဲ့ကြတာ ။ သူ့ ဆီမှာ စစ်ဗိုလ်တွေကို ဖမ်းနိုင်အောင် စစ်ဗိုလ်တွေ အမှားလုပ်ခဲ့တဲ့ စာရင်းတွေ ရှိနေသေးတယ် နောက်ဆုံးအဆင့် သူ့ အသက် အတွက် လိုအပ်ပြီလို့ ယူဆရင် ထုတ်သုံးမှာကို စစ်ဗိုလ်တိုင်းကြောက်မှာပါ ။ ဗီဒီယိုမှာ ခင်ညွန့် မျက်နှာကို သေသေချာချာကြည့်ပါ ။
ပထမပိုင်းအိမ်ထဲကို ဝင်ပြီးစကားစပြောတော့ အင်မတန်တုန်လှုပ်လို့လက်နှစ်ဖက်ကို ပွတ်ပြီးပြောပါတယ် ။
ပြောဆိုကြရင်း ခင်ညွန့် ကသူ့ စကားကိုအသိအမှတ်ပြုတယ်လို့ ယူဆချိန်မှာ
ကုလားထိုင်ကို ရှေ့ ကိုတိုးပြီး နားမလည်တဲ့ အမူအရာနဲ့ ညင်းဆန်မှုတွေပြုပါတယ် ။
နောက်တော့ သဘောတူညီမှုတခုရသွားပြီး မာန်ကိုယ်ဖို့ အမူအရာနဲ့အားလုံးကိုနှတ်ဆက်ပါတယ်
မှတ်သားစရာက ဒမြဆန်ဆန်ရထားတဲ့ ဖိနပ်တွေကိုတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့
တတိုင်းပြည်လုံးက ဆန်ပြုတ်ဝယ်သောက်နေရပါတယ် ။
နောက်တနေရာရောက်တော့ အတွေးအခေါ် အရ အပေါ်င်္စီးရသွားတာနဲ့ပညာတွေပေးပါတော့တယ် ။
၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းကစပြီး တပ်မတော်ကြီး ရပ်တည်နိုင်အောင်
ထောက်လှမ်းရေးတွေ သုံးပြီး ပြည်တွင်း၊နယ်စပ်နဲ့ နိူင်ငံတကာမှာ
ကြိုးစားပြီ အားလုံးသတ်ဖြတ် လိမ်ညာဇတ်လမ်းတွေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့သော်လည်း
ဗိုလ်ချုပ်တအုပ် ချောက်တွန်းလို့ဒီနေရာရောက်လာတာပါ ။
တပ်ချုပ်ကြီး အတွက် လိုအပ်ရင် ကူညီဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်လို့ ပြောမှာပါ ။
( ဗိုလ်ချုပ်တွေ ချီးဘရိန်းဆိုတာ ခင်ညွန့် ကသိပြီးသားပါ)
တကမ္ဘာလုံးကလူသားတွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခတ္တလွတ်မြောက်လာချိန်မှာ
မြန်မာပြည်ဖွားတွေနဲ့နိုင်ငံအသီးသီးက ခေါင်းဆောင်တွေက
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး ပထမခြေလှမ်း လို့ ကြွေးကျော်နေချိန်
လုပ်သားပြည်သူတရပ်လုံးက မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက်
အတွေးသစ် အမြင်သစ်တွေနဲ့စည်းလုံးညီညွတ်စွာ
မြန်မာပြည်သစ်ကြီးကို ပြည်လည်တည်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများရဲ့အကြီးမားဆုံး ရန်သူတော်ကြီး
ပြည်တွင်းက လူ့ အဖွဲ့ အစည်းများများ
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းများ
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းများ အပြင်
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီး တခုလုံးနဲ့ 
အန်အယ်ဒီ ပါတီကြီး တခုလုံးကို
သွေးအေးအေးဖြင့် စနစ်တကျ ရက်ရက်စက်စက်
ဥာဏ်နီ ဥာဏ်နက် ကောက်ကျစ်မှုမျိုးစုံ သုံးပြီး
မိမိတကိုယ်ရေ နဲ့သစ္စာခံ တပည့်များနေရာရအောင်
တိုင်းပြည်ကို ဖြိုခွဲခဲ့သူ ဦးခင်ညွန့်သတင်းပြန်ထွက်လာပါသည် ။
ပြဿနာတွေကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ဖြေရှင်းတတ်တဲ့
မြန်မာပြည်ကလက်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်တွေထက် ဦးခင်ညွန့် က ပိုပြီးယုတ်မာပါတယ် ။
ပြည်ပမှာနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်ဖွားတွေ အတွက်ရော
လက်တွဲ ညီညွတ်ရန် အချိန်ရောက်နေပြီဟု
နတ်ဆိုးကြီး ခင်ညွန့် ဗီဒီယိုကို ကြည့်ပြီး
( ဗီဒီယိုကို ကြည့်ရသည်မှာ တယ်လီဖုန်းဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်ဟုယူဆပါသည် )
ဖမ်းဆီးချိန်တွင် ရှေ့ တန်းမှ လည်းရိုက်နိုင်သလို အုပ်စုပြင်ပမှလည်း ထွက်ပြီး ရိုက်နိူင်သူဖြစ်လို့ 
တရားဝင်မှတ်တမ်းမဟုတ်သော်လည်း ရာထူးကြီးကြီး လူတဦးက သူ၏ကင်မရာဖြင့်ရိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး
ဖုန်းကင်မရာကို သေချာစွာမသုံးတတ်သူလို့ ထင်ပါတယ် ။)
Posted by Mr Htay Tint at 2:58 AM0comments
Daw Suu met her Son in Airport of Yangoon
Posted by Mr Htay Tint at 4:35 AM0comments
- - - - -Joint Statement - - - - - Ifbnc,Onsob,Nld(La-nl),Bdc
Joint Statement Ifbnc,Onsob,Nld(La-nl),Bdc
Posted by Mr Htay Tint at 5:39 AM0comments
View Weekly News SPDC's Post Election (22 Nov 2010)
Daw Aung San Suu Kyi zei dat Ik hou van mijn volk (14 Nov 2010 )
Weekly News SPDC's Post Election (22 Nov 2010)
Posted by Mr Htay Tint at 11:25 PM0comments
NOS Radio from Netherland for Burma
Birma Centrum Nederland by Htay Tint
2010 နိူဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ညနေ ၅ နာရီ ၂၀ ဝန်းကျင်မှာ
ကုလသမဂ္ဂနှင့် တကွ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ
အဖွဲ့ အစည်း အသီးသီး
လူထုလူတန်းစား အားလုံး ကို
၁၆ နိူဝင်ဘာလ ၂၀၁၀
ေ၇ဒီယိုမှ အသံလွှင့် ကြေညာချက်ဖြစ်ပါသည် ။
၁၈ နိူဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ နေ့ 
The Statement of Security Concern for Daw Aung San Suu Kyi
Authority Will Not Extend Temporary Stay Permit of HIV Patients Who Met With Daw Aung San Suu Kyi (News Report) November 18, 2010
Posted by Mr Htay Tint at 11:14 PM 1 comments
နွားကွဲရင် စစ်ကျားတွေက စားမှာဘဲ ။
၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာပြည်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အရှိန်ကြောင့် စစ်ဗိုလ်တွေ ခေတ်စားခဲ့တယ် ။
အတွေးအခေါ် ကွဲပြားမှု တွေက စစ်ဗိုလ်တွေကို အာဏာသိမ်းဖို့လမ်းပြခဲ့တယ် ။
၁၉၆၂ ကစပြီး မြန်မာပြည်ကို စစ်တိုင်းများခွဲကာ စစ်ဗိုလ်များ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကို တီထွင်ကြတယ် ။
၁၉၇၄ မှာ ဆိုရှယ်လစ်လို့နာမည်ခံပြီး တတိုင်းပြည်လုံးကို လိမ်ပြီး ကမ္ဘာကိုကြေညာခဲ့တယ် ။
၁၉၈၈ ကစပြီး တတိုင်းပြည်လုံးကို ဒီမိုကရေစီပေးမယ်ဆိုပြီး အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီး
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကိုလည်းဖျေက်ဖျက်ဖို့လူဖမ်းပွဲကြီး
စနစ်တကျလုပ်လို့ ထောင်ထဲမှာလည်း လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေ အခုထိအပြည့် ။
၂၀၁၀ မှာလည်း စစ်တပ်အသိုင်းအဝိုင်းက တရားဝင်နိုင်အောင်နည်းမျိုးစုံလုပ်မှာဘဲ ။
တစညကိုလည်း အရံပါတီအဖြစ် ထားတာ ။
ဒီငြိမ်းကဘဲ ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် ကို ဖျက်ရန်ပြောနေတုံး
ကြံ့ဖွံ့ပါတီက အစိုးရဖွဲ့ ပြီး ပြိုင်ဘက်အားလုံးကို လုပ်ငန်းနှောက်ယှက်မှု
တိုင်းပြည် ဆူပူအောင်လုပ်တဲ့ အမှုတွေနဲ့ထောင်ချလိမ့်မယ် ။
မိမိကိုယ်ကို သိဖို့ကောင်းကြပြီ။
တိုင်းပြည်ထဲမှာ လူထုနဲ့နိုင်ငံတကာက အသိမှတိပြုထားတဲ့ ခေါင်ဆောင်ရှိတယ် ။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းနောက် မလိုက်ဘဲ မိမိကိုယ်ကို သိပ်တော်တယထင်တဲ့လူတွေအတွက်
ဂဝံကျောက်တွေက အထုခံဖို့ စောင့်နေတယ် ။
နွားကွဲရင် စစ်ကျားတွေက စားမှာဘဲ
http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/4893-2010-11-16-10-08-31နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲ အရေအတွက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဖြင့် အနိုင်ရသွားသော ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) အား ပါတီအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းများကိုလည်း အသိအမှတ် မပြုရန် ဒီမိုကရေစီ နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ (ဒီငြိမ်းပါတီ) က တောင်းဆိုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး လက်ကမ်းကြော်ငြာများကို ရန်ကုန်မြို့တွင်း၌ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်က လိုက်လံ ဖြန့်ဝေနေသည့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်များ (ဓာတ်ပုံ - AP)
“ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အခုအချိန်ထိ ဆက်လုပ်နေတုန်းပဲ။ ဒီတော့ တရားဝင်ပါတီ အဖြစ်ကနေ ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ နဲ့ ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကျူးလွန်နေတဲ့ ပါတီကိုယ်စားလှယ် တွေကိုလည်း အသိအမှတ် မပြုပေးဖို့ တောင်းဆိုတာပါ” ဟု ဒီငြိမ်း ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ထိုတောင်းဆိုမှုအား နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်၊ တခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီများ အားလုံးကို ဖြန့်ဝေ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ဦးအောင်သန်းက ဆက်ပြောသည်။
“တောင်းဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုတာ၊ မပြုတာသူတို့အပိုင်းပါ။ အသိအမှတ် မပြုဘူးဆိုရင် တခြား နိုင်ငံရေးပါတီ အားလုံးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆက်လုပ်မယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ လုပ်ပြီးတော့ တောင်းဆိုသွားဦးမှာပါ” ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ မတရားမှုများကို ဖော်ထုတ်ပေးရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပပေးရန် နိုင်ငံရေးပါတီ အများစုက တောင်းဆိုနေကြချိန်တွင် ဒီငြိမ်းပါတီက ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို ပါတီအဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းပေးရန် ပထမဆုံး တောင်းဆိုသော ပါတီဖြစ်သည်။
“ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရန် လျှောက်ထားခွင့် မရှိစေရ ဆိုတဲ့ ပါတီအမျိုးအစားထဲမှာ ကြံ့ဖွံ့ပါတီရဲ့ လုပ်ရပ်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေလို့ အခုလို ဖျက်သိမ်းဖို့ တောင်းဆိုရတာပါ” ဟု ဦးအောင်သန်းက ရှင်းပြသည်။
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသော နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ အခန်း (၂)၊ ပုဒ်မ (၇) အပုဒ်ခွဲ (ဂ) တွင် ဖော်ပြထားရာ၌ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် နိုင်ငံပိုင် ပစ္စည်းများ၊ အဆောက်အအုံများအား တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍ သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုမည် ဆိုပါက တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ခံရမည်ဟု ပါရှိသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ခင်ကလည်း သိပါတယ်။ ရလဒ်တွေကို မကျေနပ်လို့ လုပ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကြံ့ဖွံ့အသင်းကနေ ပါတီကို ကူးပြောင်းလာတာပါ ဆိုပြီး ဦးဌေးဦးက ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခုရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်တွေကိုပဲ ကြေညာတယ်။ ပါတီက ဘယ်လိုရပ်တည်ပါတယ်၊ အသင်းကို ဖျက်သိမ်းပါတယ် ဆိုတာလည်း တရားဝင် ပြောတာ ဘာမှ မရှိသေးလို့ အခုလို လုပ်ရတာပါ” ဟု ဦးအောင်သန်းက ဆိုသည်။
ဒီငြိမ်းပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး ၀င်ပြိုင်ခဲ့ရာ ၇ ရက်နေ့ညတွင် တချို့က နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် တဦးမှ အနိုင်မရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၉၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီက မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ (မဆလ) အား နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဒေါက်တာမောင်မောင်က ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီး ပါတီထဲမှ တပ်မတော်သားများ၊ တပ်မတော် ကိုယ်စားပြုထားသူများ၊ နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းများကို ပါတီဝင်များ အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းများ ရှိခဲ့သည်ဟု ဦးအောင်သန်းက ရှင်းပြသည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေတွင် ပါတီဝင်များသည် နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းများ မဖြစ်စေရ ဟု ပါရှိသော်လည်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းစိန် (၀န်ကြီးချုပ်) အပါအ၀င် ပါတီဝင် အများစုမှာ နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းများ ဖြစ်နေသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် ရွေးကောက်ပွဲ၌ နည်းလမ်းပေါင်းစုံ အသုံးပြုကာ အနိုင်ယူခဲ့ပြီး တရားမ၀င်သော ကြိုတင်မဲ များကို အကန့်အသတ် မရှိ အသုံးပြုကာ ပြိုင်ဘက်ပါတီများအား အနိုင်ယူသွား ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲဝင် ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
“ကြိုတင်မဲတွေ၊ လိမ်တဲ့မဲ၊ ခိုးတဲ့မဲတွေ အပြင် ပျောက်မဲ ဆိုတာက ၂ သောင်းကိုးထောင်ကျော်ပါသေးတယ်၊ ပယ်မဲ ကလည်း ၂ သောင်းကျော်ပါတယ်။ ပယ်မဲဆိုတာ ရှိပေမယ့် ပျောက်မဲဆိုတာ ဘာလည်းဆိုတာ သေရှာမသိဘူး၊ ဒါဟာ ပဲခူးတမြို့နယ် တည်းမှာ ဖြစ်တာပါ” ဟု ပြည်ထောင်စု ဒီမိုကရေစီပါတီ( UDP )၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဌေး က ပြောသည်။
ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသော ကိုယ်စားလှယ်များသည် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည်ကျင်းပေးရန် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက တောင်းဆိုခဲ့ ကြသည်။
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ ( တစည ) မှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အနိုင်မရခဲ့သော ကိုယ်စားလှယ် တဦးက မူ၎င်းတို့ ပါတီအနေဖြင့် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ၏ မဲမသမာ မှုများကို ဖော်ထုတ်၍ ကော်မရှင် အဆင့်ဆင့်ကို တင်ပြသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း ကန့်ကွက်ခြင်းကိုမူ မပြုလုပ်ဟု ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ပါတီက မဲမသမာမှု တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ စာရင်း ကောက်ယူပြီး ကော်မရှင်ကို တင်ပြမယ်။ သူများတွေလိုတော့ မကန့်ကွက်ပါဘူး၊ နောင်လာမည့်် ၅ နှစ် ရွေးကောက်ပွဲ ရောက်ရင် အလားတူ မဲလိမ်၊ မဲခိုးမှု တွေ မဖြစ်ပေါ် အောင် ကော်မရှင်က ဆောင်ရွက် ပေးပါလို့ပဲ တောင်းဆိုသွားမှာပါ” ပဲခူးတိုင်းမှ ၀င်ပြိုင်ခဲ့သည့် တစည ကိုယ်စားလှယ်က ပြောသည်။
တစည ပါတီဝင်များသည် ဗဟိုမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လမ်းညွန်မှု အတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်ရ ကြောင်းလည်း ရှင်းပြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ကန့်ကွက်နေကြသော် လည်း လက်ရှိအာဏာရရှိ ထားသော ကြံ့ဖွံ့ပါတီသည် တရားဝင်အစိုးရ ဖြစ်ရေးအတွက် အစိုးရသစ်ဖွဲ့ရေး၊ လွှတ်တော် အမြန်ခေါ်ယူရေးတို့ကို လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သူများ ကပြောသည်။
ဒီမှာ ဆော်ထားတဲ့ သတင်း မှတ်တမ်း အဖြစ်သိမ်းထားတာ
ZarNi Told Nld Policy Mistakes
Posted by Mr Htay Tint at 2:40 PM0comments
ကာကွယ်ခြင်းသည် ကုသခြင်းထက် ထိရောက်သည့် အတွက်
ဒီစာဖတိပြီးသူတိုင်း ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးကြ။
protection is better than treatment.
ThanShwe Order KhinYee and TheinSein to Combine to Take Out Daw Aung San Suu Kyi
Posted by Mr Htay Tint at 3:37 AM0comments
Getuigen uit Birma
Burgers luisteren aandachtig naar Daw Aung San Suu Kyi.
Our leader come back for our freedom
အမေစု/Daw Aung San Suu Kyi
“မြန်မာပြည်သူတွေဟာ တယောက်နဲ့ တယောက် သည်းငြီးခံတတ်ကြတယ် ဟုတ်တယ် မလား”
Burgers van Birma hebben jullie geduld voor elkaar?
Als het waar is mag ik jullie dan wat vragen?
Oke hier komt de vraag.
ဒီရှေ့က(စင်ရှေ့က) လူတွေက ကျမ အသံကို ထိုင်ပြီး တော်တော်လဲ နားထောင်ပြီးသွားပါပြီ..
De mensen die hier voor zitten kunnen alles goed horen en zien.
ဟိုးဘက် (ရွှေဂုံတိုင်ဘက်ခြမ်း) က လူတွေရယ် နောက်ကလူတွေရယ်က
De mensen achter en aan de zijkant staan al heel lang.
မတ်တပ်ရပ်နေရတာ တော်တော်ကြာပါပြီ သည်းငြီးခံနိုင်တယ်ဆိုရင်
ဒီရှေ့က လူတွေက အဲဒီလူတွေနဲ့ နေရာလဲပေးလိုက်ပါလား”
Als jullie geduld hebben. Kunnen jullie mensen van voor naar
achteren schuiven en de mensen van achter naar voren schuiven?
Wauw ik kan mijn ogen niet geloven!
အမေစု အဲလိုပဲ ပြောလိုက်ရော…”
“ချက်ခြင်းပဲ ရှေ့ကလူတွေက ထပြီး နောက်ကလူတွေနဲ့ နေရာလဲပေးကြတာဗျာ….
Iedereen die aanwezig was bij Daw Suu haar toespraak was.
Wauw ik kan mijn oren en ogen echt niet geloven wat er hier is gebeurd.
ထောင်သောင်းချီနေတဲ့ လူအုပ်ကြီး ချက်ချင်း နေရာ လဲပေးကြတာဗျာ…
ongeveer vijftigduizend mensen deden wat Daw Suu vroeg zonder
een woord of geluid.
Zonder woord, geluid of geweld was het in een keer gebeurd.
Als of zij soldaten zijn,nooit hebben ze met elkaar beoefend
om zo iets met vijftiendeuizend mensen te doen.
Dit laat zien dat zij veel macht heeft
လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်ထားရင်
Iedereen geloof dat zij de grote leider is van Birma.
သေနတ်ပြပြီး အုပ်ချုပ်နေစရာမ လိုဘူး….
ik geloof dat zij zo machtig is dat zij ons kan leiden
zonder dat wij mensen vast houden en geweld gebruiken.
စကားလေး တခွန်းပြောပြီး ညင်ညင်သာသာ ခိုင်းရုံနဲ့
Ze hoeft weinig te zeggen of vragen om mensen iets te laten doen.
Op dit manier laat zij duidelijk zien dat mensen veel respect hebben voor haar.
(ဗမာပြည်ထဲက သူငယ်ချင်းတယောက်က ပေးပို့လာတာကို တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်)
(Dit is echt gebeurd op 15 november 2010 u kunt binnen kort op zoeken op youtube.com)
Htay Tint & Thiwa
Posted by Mr Htay Tint at 9:59 AM0comments
Gen Saw La Bhaw agree Daw Suu
Shan rebel leader concerned over The Lady’s security
Monday, 15 November 2010 16:26 Hseng Khio Fah
Lt-Gen Yawd Serk, leader of the anti-Naypyitaw Shan State Army (SSA) ‘South’, in response to Burma pro-democracy Daw Aung San Suu Kyi’s call for “a second Panglong conference”, says he is still worried about her security and whether she will be able to hold the “21st century Panglong conference” because she will be under 24 hour surveillance by the ruling military junta.
“Her release doesn’t mean she can do everything she wants. It has limitations. So I am not sure whether she can move around freely or not because she will be followed by the ruling military either directly or indirectly,” Yawd Serk said.
Daw Aung San Suu Kyi, at the public gathering held yesterday, said that she is willing to calla21st century “Panglong Conference” as mentioned earlier in 1989.
“I am therefore concerned how much she will be able to work for the ethnic peoples,” he said.
Nevertheless, Yawd Serk urged all people from Burma including ethnic nationalities to protect Daw Aung San Suu Kyi and continue supporting her because she is the only one who can lead the way in the implementation of the Panglong Agreement which was signed between her father Aung San who represented the Burmans, and leaders of Shans, Kachins and Chins in 1947.
“The root cause of the political problems in Burma is that the Panglong Agreement has been neglected and violated by the military junta. The problems between the ethnic groups and the Burma Army will never come to an end if the Agreement will still be ignored,” said Lt-Gen Yawd Serk.
“But to implement it, only Daw Aung San Suu Kyi can play the central role. Without Suu Kyi, nobody is going to believe the junta.”
The Panglong Agreement promises “Full autonomy in internal administration” and “rights and privileges which are fundamental in democratic countries.”
According to him, Daw Aung San Suu Kyi also needs to promote participation of the ethnic nationalities to buildagenuine union. “Without ethnic participation, it will be difficult to resolve the problems of Burma.”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လေးစားယုံ - ကြည်တယ်လို့ - - - - - - - - - ဗိုလ်မှူးချုပ် စောလားဘွယ် - ပြောဆို
ဆုံဆည်းရာ၊ ၁၅ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ - - - - - - - - - - - - --
မြ၀တီကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်တုံးက နအဖ အင်အားက ၈၀ လောက်ပဲရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့က သူတို့ထက် အင်အားများတယ်။ တိုက်ပွဲစ ဖြစ်တာနဲ့ ကျွန်တော်တို့က လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ သူတို့ကိုပဲ ထိအောင်ပစ်တာ၊ သူတို့က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ထင်သလိုပစ်တာ လူထုတွေထိကုန်တယ်။ ကျွန်တော် တော်တော် စိတ်မကောင်းဘူး။ ထိုင်းဖက်ကိုလဲ သူတိုပဲ ပစ်တာ။ ဆက်ပြီး မြ၀တီ ကိုထိန်းထားရင် ရပင်မဲ့ လူထုထိမှာကြောင့်လို့ ကျွန်တော်တို့ အစီစဉ် ရှိရှိနဲ့ပဲ ဆုတ်ခွာပေးလိုက်တာပါ။ သေဆုံးသွားတဲ့ မြ၀တီက လူထုတွေအတွက် ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အခုလဲ မြ၀တီကို ဆုတ်ပေးလိုက်ပင်မဲ့ ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖေါ်သွားမယ် ဆက်တိုက်သွားပါ့မယ်။ နေ့စဉ်လိုလို ဘုရားသုံးဆူ၊ ဝေလေ နဲ့ ကြားခံနေရာတွေမှာ တိုက်ပွဲတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ တပ်ပေါင်းစုတွေလဲ ညီညီညာညာနဲ့ ၀ိုင်းတိုက်ကြပါ အတွင်းအပြင် စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိကြရင်ကောင်းမယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို တတ်နိုင်တဲ့ ဖက်က ၀ိုင်းကူညီ ကြပါ။
နအဖ က ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးဆိုတာ အသက်ရှူ ခွင့်ပဲ ပေးတာပါ ။ အသက်ရှည်ခွင့်ပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အခု နယ်ခြားစောင့်တပ် လုပ်လိုက်ရင် အသက်ရှူခွင့်တောင် သေချာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လူထုအတွက် ကောင်းရာကောင်းကျိုး ဘာမှ လုပ်ခွင့်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဖူး။
15 Nov Myawady News
ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာစစ်တပ် သိမ်းပိုက်ထားသော
ဝလေစခန်းသို့နယ်ခြားစောင့်လက်မခံသော ကရင်တပ်စုမှ အာပီဂျီ တလုံးပစ်သွင်းခဲ့ပါသည် ။
မြန်မာစစ်တပ်အနီင်္း နေထိုင်သော အရပ်သားးတဦး ပွဲခြင်းပီး သေဆုံးခဲ့ပါသည် ။
မြန်မာစစ်တပ်မှ အာပီဂျီလာရာ လမ်းကြောင်းကို
လက်နက်ကြီးများဖြင့် ၁ နာရီကျော်ကြာ ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု
သတင်းရရှိပါသည် ။( တရုပ်က လက်နက်စက်ရုံပိုင်ရှင်ကတော့ ပျော်နေတာပေါ့)
မြဝတီမြို့ တွင်းရှိ ဒီကေဘီကေတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ပိုင်ဆိုင်သော
ချိတ်ပိတ် လိုက်ပါသည် ။
အိမ်ပိုင်ရှင် အမျိုးတော်သူများက ခွင့်တောင်းပြီး
ငွေညစ်ခြင်း သတင်းရရန် နှိပ်စက်ခြင်းများ
မြန်မာစစ်တပ်ကို မည်သူမျှ မဆက်သွယ်ပါ .
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက် လာခြင်းကို
ဝမ်းသာခြင်း ပီတိများစွာဖြင့် နားဆင်နေကြပါသည် ။
မြဝတီ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပါအဝင် ပြည်နယ်များတွင်
မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ကရင်တပ် ကချင်တပ် ရှမ်းတပ် မွန်တပ် စစ်ပွဲများကို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တဦးတည်းမှသာ ဖြေရှင်းနိူင်မည်ဟု
အညိုရောင်ဒေသဟု မြန်မာစစ်တပ်မှ သတ်မှတ်ထားသောဒေသရှိ
စားသောက်ရန် တို့ အတွက်
သေနပ်ကိုင် ယောင်္ကျားရင့်မာ့ကြီးများရဲ့ 
ကလိမ်ကကျစ် ယုတ်မာမှု စံမံချက်များမှ
Posted by Mr Htay Tint at 7:55 AM0comments
busiest days for Daw Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi's talks exclusively to the BBC
14 November 2010 Last updated at 13:03 GMT
In her first interview since being released, the Burmese opposition leader, Aung San Suu Kyi, has told the BBC's Alastair Leithead that she plans to listen to what the people of Burma want before taking her next steps.
She has already spoken to supporters and journalists at her party headquarters in Rangoon, saying she'll talk to Western nations about lifting sanctions if that's what the Burmese people want.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မီဒီယာတွေ ပြောတဲ့ စကား အသံဖိုင်
Posted by ဒေါင်းအိုးဝေ on 7:38 AM
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမေးအဖြေများ
နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၀။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် သူတယောက်တည်း လုပ်လို့မရဘူးလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ပါတီ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီ လိုလားတယ်ဆိုရင် အားလုံးနဲ့ လက်တွဲလုပ်သွားမယ်လို့ တနင်္ဂနွေနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေအရေး၊ NLD ရဲ့ ရှေ့ရေး၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဖယ်ရှားရေး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲပေးခဲ့သူတွေအပေါ် သူ့အမြင်တွေကို ဖြေကြားခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ အကြောင်းကို မစုမြတ်မွန်က စုစည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးချုပ်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တော်တော်လေး အော်ဟစ် ဖြေကြားခဲ့ရတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ သူ့ကိုမေးကြတဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်ပက သတင်းထောက်တွေကလည်း သူ့ထက်ငါ အလုအယက်ကို မေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လွတ်မြောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းထောက် တယောက်က မေးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က…
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က NGO အဖွဲ့အနေနဲ့ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကိုလည်း ရှင်းပြပါတယ်။
“ဒီအဖွဲ့ချုပ်က နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ပဲ။ အဲဒီတော့ အန်တီတို့ အနေနဲ့ NGO ဖွဲ့မယ်လို့လည်း တခါမှ မပြောခဲ့ဘူး။ အန်တီတို့ ပြောတာက လူမှုဝန်ထမ်း အလုပ်တွေ လုပ်ရမယ်။ လူမှုဝန်ထမ်း အလုပ် လုပ်တယ်ဆိုတာ၊ လူမှုဝန်ထမ်းဆိုတာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ခွဲခြားလို့ မရဘူး။ အခုအချိန်မှာ အန်တီတို့ ပြည်သူတွေက အင်မတန်မှ လိုအပ်နေတယ်။ ဆင်းရဲနေတယ်၊ ဒုက္ခရောက်နေတယ်၊ အကူအညီ လိုနေတယ်။ အဲဒီ လိုချင်တဲ့၊ လိုနေတဲ့ အကူအညီတွေကို ပေးနိုင်သလောက် ပေးဖို့ပဲ။ အဲဒါလည်း အခုမှလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုမှပြောတာ ဆိုပေမဲ့ တကယ်တော့ ၁၉၉၅ ခုနှစ်ကတည်းက စပြီးတော့ ဒီလို လူမှုဝန်ထမ်း အလုပ်တွေကို လုပ်ခဲ့တာပဲ။”
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၀။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းတာဟာ စိတ်မကောင်းစရာလို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မြင်ပါတယ်။
“ပြည်သူတွေရဲ့ အားက အန်တီ့အားပဲ။ အန်တီ့အားဖြစ်အောင် အားရှိရှိနဲ့ နေရမှာပေါ့။ အန်တီက တယောက်တည်း လုပ်လို့ရလို့လား။ စောစောကလည်း ပြောပြီးပြီ၊ လူတယောက်တည်း ဒီမိုကရေစီ လုပ်လို့ရရင် ဒီလောက်များ လွယ်မယ် ထင်လို့လား။ တန်ဖိုး အတော်ရှိတဲ့ကိစ္စနော်၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကိစ္စတခုအတွက်ဆိုရင် အများကြီး ပေးဆပ်ရတယ်။ တယောက်တည်း လုပ်လို့လည်း မရဘူး။ တယောက်တည်း လုပ်လို့ရတယ်လို့ ထင်ရင်လည်း ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်ကို မဟုတ်တော့ဘူး။ အဲတော့ ပြည်သူက ဒီမိုကရေစီ လိုချင်ပါတယ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်ပေးဆိုရင် ဒီမိုကရေစီရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ အာဏာရှင် တယောက်ပဲ ပေါ်လာမှာပဲ။ အဲတော့ ပြည်သူက ၀ိုင်းပြီးလုပ်ရမယ်။”
AP News Myanmar's Suu Kyi, newly free, calls for talks
YANGON, Myanmar – Democracy heroine Aung San Suu Kyi took her first steps back into Myanmar's political minefield Sunday, vowing to press ahead in her decades-long fight for democracy while also calling for compromise with other political parties and the ruling junta.
"I've always believed in compromise," the Nobel Peace laureate told reporters in the dilapidated offices of her party, the National League for Democracy, with its rough concrete floor and battered wooden furniture. "I am for national reconciliation. I am for dialogue. Whatever authority I have, I will use it to that end ... I hope the people will support me."
This Southeast Asian nation, once known as Burma, has been ruled by the military since 1962, leaving it isolated from much of the international community and battered by poverty. The junta has an abysmal human rights record, holding thousands of political prisoners and waging brutal military campaigns against ethnic minorities.
Earlier Sunday, Suu Kyi spoke toarapturous crowd of as many as 10,000 people who jammed the street in front of the office. While the speech was technically illegal — any gathering of more thanahandful of people needs government permission in Myanmar — the authorities made no arrests.
Deeply charismatic, the 65-year-old Suu Kyi is by far the country's most popular politician,apopularity the junta clearly fears. Dozens of secret police officers were on hand Sunday to record her comments and photograph those in attendance.
"I believe in human rights and I believe in the rule of law. I will always fight for these things," she told the crowd. "I want to work with all democratic forces and I need the support of the people."
"If we want to get what we want, we have to do it in the right way; otherwise we will not achieve our goal however noble or correct it may be," she cautioned.
Click image to see photos of Aung San Suu Kyi's release
Later, Suu Kyi told reporters her message to junta leader Gen. Than Shwe was, "Let's speak to each other directly." The two last met in secret talks in 2002 at the encouragement of the United Nations.
Energized as Suu Kyi's supporters are, she facesamilitary determined to cling to the power it has wielded for decades, and any collision between the two could well land Suu Kyi right back from where she emerged this weekend — house arrest and isolation.
"It could bealittle bit ofacat and mouse game," said Trevor Wilson, former Australian ambassador to Myanmar and nowavisiting fellow at the Australian National University in Canberra. "The regime may wait for her to makeatactical error and crack down on her again."
But she insisted Sunday her time in detention — inacrumbling lakeside family villa where she hadasmall staff — was far easier than most prisoners here face. Human rights groups say the government holds more than 2,200 political prisoners.
That defiance and the immense personal costs she has paid — held in detention, cut off from her family — has given Suu Kyi's followersanear-mystical belief in her abilities.
Today (November 14, 2010) is the one of the busiest days for democracy icon and Burmese national hero Daw Aung San Suu Kyi.
ဒီကနေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အလုပ်အများဆုံးနေ့ထဲက တရက် ဖြစ်ပါတယ်
Daw Aung San Suu Kyi Meet with actor and social activist Kyaw Thu in the morning. (Photo News)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ မနက်ပိုင်းမှာ ရုပ်ရှင်မင်းသား ကျော်သူကို လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
And she met with diplomats @ 11 AM.
အဲဒီနောက် မနက် ၁၁ နာရီမှာ သံတမန်များနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
Then, Daw Aung San Suu Kyi gave the speech to the tens of thousands of her supporters @ 12 noon.
နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာတော့ ပြည်သူ ထောင်သောင်း (သုံးသောင်းလောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။) ကို မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
http://burmatoday.net/photo2005/2010/201011/101114_daw_aung_san_suu_kyi_speech/ (Photo News)
http://burmatoday.net/audio/101114_daw_aung_san_suu_kyi_speech.html (Audio File)
After that, Burmese national hero Daw Aung San Suu Kyi meets the press @ 1 PM. (Audio File)
အဲဒီနောက် နေ့လည်တနာရီမှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
Finally, she attends the funeral service of NLD leader U Lwin’s wife @2PM.
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကျင်းပအပြီး နေ့လည် ၂ နာရီမှာတော့ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးလွင်ရဲ့ဇနီး ဈာပနအခမ်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
19 နာရီ 44 မိနစ် - မြန်မာစံတော်ချိန်
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လာတာ ကျနော်တို့သိပ်ကို ဝမ်းသာတယ်။ ကြိုလဲ ကြိုဆိုတယ်။
ကျနော်တို့ဘက်ကဖြစ်စေချင်တာက မကြာခင်တုန်းက ကလေးမြို့မှာ NLD ခေါင်းဆောင်တွေ၊ နောက် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တွေ ချုပ်ဆိုထားတဲ့ သဘောထားထင်မြင်ချက် အဲဒါကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်လာနိုင်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွန်းအားပေးရင်ကောင်းမယ်လို့ ကျနော်တို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အဲဒီ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်ဘဲနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုိုင်ငံ ဘယ်လိုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒီကနေ့ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေရတာဟာ အမှန်ကတော့ တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေလို့ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သိပါတယ်။
ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် စိုင်းလိတ်
ဒီမိုကရေစီအရေးတွက် အရိပ်အယောင် သန်းလာတဲ့ သဘောရှိတယ်…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် လုပ်ပေးစေချင်တာက သူနဲ့ ဘဝတူ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အကုန်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့ကို ကြိုးပမ်းစေချင်တယ်… ဒုတိယ တချက်က ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းရင်းနဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို တဆက်ထဲ ကြိုးပမ်း စေချင်တယ်…
တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရအောင် အပစ်ခတ် ရပ်စဲထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ သော်လည်းကောင်း အပစ်အခတ်ရပ်စဲခြင်းမရှိသေးတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့သော်လည်းကောင်း ဒီလက်ရှိ အစိုးရနဲ့ အဆင်ပြေပြေညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဖြစ်မြောက်ဖို့ တနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…
ဇိုမီးအမျိုးသားကွန်ဂရက် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးပူကျင့်ရှင်းထန်
ကျနော်တို့ အထင် အခုချိန်ခါမှာ ဘာအလိုအပ်ဆုံးလဲဆိုတော့ ကျနော် ကလေးမြို့ မှာ ကြေညာတဲ့အတိုင်း ဒုတိယပင်လုံ ညီလာခံလိုနေတယ်… အခု အခြေခံဥပဒေ ဆွဲထားတယ် ပြောတယ်၊ ဒါတွေ ကျနော်တို့ လက်မခံဘူး… အခု ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်တယ်၊ ဒါကို ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်ဘူး…
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ဒုဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုဒေးဗစ်သာကပေါ
သူ့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး သက်သက်ပေါ့ တိုက်ပွဲလုပ်လာတာ။ အင်မတန် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အာဏာမက်မောတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ ဘာမှ အောင်မြင်ဖို့ မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်လဲ သူ ဘာမှ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲတော့ သူအနေနဲ့က ပြန်ပီးစဉ်းစားရမယ်။ အခု နအဖက ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်၊ အစိုးရအသစ်ထောင်မယ် စသဖြင့် အဲဒီဘောင်အတွင်းမှာ သူတို့ သေချာ ပြန်လည် သုံးသပ်ရမယ်… အရင်ပုံစံအတိုင်းတော့ မလွယ်တော့ဘူး ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတ်ဘူး။
Non – Violence အကြမ်းမဖက်တဲ့ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲဆိုတာက ယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံမှသာလျှင် ဖြစ်တာ။ အာဏာရ အစိုးရကလဲ လူ့အခွင့်အရေးလို ပြည်သူတွေရဲ့ ကောင်းစားရေး လွတ်လပ်ရေး အစရှိတဲ့ အဲဒီအတွက် ဆန္ဒရှိတဲ့ အစိုးရမျိုး မှာမှ ကျနော်တို့က လုပ်လို့ရမယ်။
အခုက အဲလိုမဟုတ်တဲ့အခါကျ ပြည်တွင်းက အကြမ်းမဖက်နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုက အကျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ မြင်တယ်လေ… ဆိုပါတော့ဗျာ၊ သူက လူထုဆန္ဒပြပွဲမဟုတ်သေးဘူးနော်၊ လူထုအစည်းအဝေးတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တခါ ထောင်ထဲမှာ ပြန်ထည့်မှာပဲ အဲဒီအတိုင်းလာမှာပဲ။
Posted by Mr Htay Tint at 11:00 AM0comments
Daw Aung San Suu Kyi speed Nov 2010
Aung San Suu Kyi's Speech at HQ of NLD
ဆုံဆည်းရာ ၁၄ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀
ယနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားတဲ့ မိန့်ခွန်းအသံဖိုင်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁၄။၁၁။၁၀-- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ကောက်နုတ်ချက် --- 14,NOV 2010
“ ကျမတို့ပြောနေတာလဲ နိုင်ငံရေးဘဲ။ အားလုံးနိုင်ငံရေးဘဲ။
ကျမတို့ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေးကို နားလည်အောင်လုပ်ပါ။
အရှေ့က လုပ်နေတဲ့သူကို အနောက်က လူက ထိန်းနိုင်ရမယ်။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီဘဲ။
ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ထိန်းသိမ်းတာကို ခံပါမယ်။ တခြားသူ ထိန်းသိမ်းတာကို မခံနိုင်ဘူး။
ကျမ ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ချိန်မှာ လုံခြုံရေးသမားတွေ အများကြီး တွေ့ရပါတယ်။
ကျမအပေါ် ကောင်းကောင်းဆက်ဆံတဲ့ သူတွေကိုပါ။ ကျေးဇူးကို သိတတ်တဲ့သူက နည်းတယ်။
ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့သူ ရှားတယ် ဆိုတာကို ကျမကတော့ လက်မခံချင်ဘူး။
ကျေးဇူးသိတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ တယောက်နဲ့တယောက် သည်းခံရမယ်။
အရှေ့က လူက နောက်ကလူကို သိတတ်ရမယ်။
နောက်ကလည်း ရှေ့ကလူကို သိတတ်ရမယ်။ ဒါဟာ ကျမရဲ့ အခင်းအကျင်းဘဲ။”
“ ပြည်သူကြားမှာ အားလုံးကြားမှာ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဆက်လုပ်သွားမယ်။
ဘယ်သူဘဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ချင်ရင် ရတယ်။
စကားပြောချင်လည်း ရတယ်။ ကျမတို့ဘက်က ပြည်သူ့အင်အားတွေ လိုပါတယ်။
အခု ပြည်သူတွေ ကျမတို့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာ သိရတယ်။ ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှု၊ ပြည်သူရဲ့ ထောက်ခံမှုကို ရယူသွားမယ်။
အခု ဘာလုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို မပြောနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
အပြင်ထွက်ထွက်လာခြင်း ဘာလုပ်မယ်၊ ညာလုပ်မယ်ဆိုတာကို ပြောတာက နားမလည်ဘဲ ပြောတယ် ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ။
ကျမတို့အားလုံး အနာခံရပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေလည်း အနာခံခဲ့ရပါတယ်။
အနာခံရမယ်ဆိုရင် သည်းခံပြီး အနာခံကြပါလို့ ကျမပြောချင်တယ်။
လိုတော့လိုချင်တယ် အနာတော့ မခံချင်ဘူးဆိုတာတော့ မဖြစ်ဘူး။ အမှားအမှန်ကို ကိုးစားပြီး သိရမယ်။
အမှန်ဘက်က ရပ်တည်ရမယ်။ အမှားအမှန်က တစ်ချိန်လုံး အတည်ယူလို့မရဘူး။ အချိန်အတိုင်း ပြောင်းလဲမှု ရှိတယ်။
မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ အင်အားကို ဘယ်သူကမှ ဖြိုလို့မရဘူး။”
“ကျမ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ယုံကြည်တယ်။ တောင်းပန်တာကို ကျမက တန်ဖိုးထားတယ်။
ကျေးဇူးတင်ထိုက်တာကို ကျမ ကျေးဇူးတင်တယ်။”
“လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်းမှာ လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်နဲ့ စထားတယ်။ ဒါကို လေးစားရမယ်။
တာဝန်သိရမယ်။ ဒါမှ ကျမတို့ နိုင်ငံတိုးတက်မယ်။
ကျမတို့နိုင်ငံတိုးတက်တယ်၊ မတိုးတက်တာ ပြည်သူသိတယ်။
မတိုးတက်တာ ဘယ်သူ့ကြောင့်လို့ ပြောနေလို့ အပိုဘဲ။ ကျမတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါလို့ဘဲ ပြောမယ်။
ကျမတို့ပြည်သူက လက်ဖြန့်ပြီးတောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျမ သိတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်။” “ကျမ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို ကျမ အမြဲ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျမတို့ဟာ ပြည်သူရဲ့ အင်အားကို အားကိုးပြီးတော့ အလုပ်လုပ်နေတာလို့ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ပြည်သူရဲ့ အင်အားကို စနစ်တကျသုံးမှပဲ ထိရောက်မှာပါ။
ပြည်သူတွေကို ထပ်ပြီး မှာပါရစေ။ ကိုယ်လိုချင်တာကို မျှော်လင့်နေရုံနဲ့ မအောင်မြင်ပါဘူး။
ကိုယ်လိုချင်တာကို ရအောင် လုပ်ကြမှ လုပ်ရဲမှ လုပ်နိုင်မှ ရမယ်။
အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကို ရှာရမယ်’’
“ကျမရဲ့ လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူတဲ့ သူတွေက ကျမကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံကြတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျေးဖူးတင်တယ်။
ကျမကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံသလိုပဲ ပြည်သူအားလုံးအပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်မလဲလို့ ကျမ တွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျမကို အကျယ်ချုပ် ချသလိုတော့ ပြည်သူကို မချစေချင်ဘူး။
ပြည်သူကို အကျယ်ချုပ် မချပါနဲ့။
“မကောင်းတာကို မပြောစေချင်ရင် မလုပ်ပါနဲ့။ ကောင်းတာတွေကို ကျမတို့က တန်ဖိုးထားပါတယ်၊ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်။
ကောင်းတာတွေချည်း လုပ်နေရင် တသက်လုံး ကျမ ကျေးဇူးတင်လို့ ဆုံးမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး’’
ယနေ့ ၁၂ နာရီ NLD ရုံးေ၇ှ့တွင် ဟောပြောခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက်
ပေးပို့ သူ salai zamte ၁၄- ၁၁- ၂၀၁၀
ဒီရှေ့က(စင်ရှေ့က) လူတွေက ကျမ အသံကို ထိုင်ပြီး တော်တော်လဲ နားထောင်ပြီးသွားပါပြီ.. ဟိုးဘက် (ရွှေဂုံတိုင်ဘက်ခြမ်း) က လူတွေရယ် နောက်က
လူတွေရယ်က မတ်တပ်ရပ်နေရတာ တော်တော်ကြာပါပြီ သည်းငြီးခံနိုင်တယ်ဆိုရင် ဒီရှေ့က လူတွေက အဲဒီလူတွေနဲ့ နေရာလဲပေးလိုက်ပါလား”
အရမ်းအံ့သြဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ… ထောင်သောင်းချီနေတဲ့ လူအုပ်ကြီး ချက်ချင်း နေရာ လဲပေးကြတာဗျာ… အံ့သြဖို့ ကောင်းလိုက်တာ”….
လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ခေါင်းဆောင်လို့ သတ်မှတ်ထားရင် သေနတ်ပြပြီး အုပ်ချုပ်နေစရာမ လိုဘူး…. ထောင်နဲ့ ခြောက်ပြီးလဲအုပ်ချုပ်နေစရာမလိုဘူး…
စကားလေး တခွန်းပြောပြီး ညင်ညင်သာသာ ခိုင်းရုံနဲ့ လူတွေက လိုက်လုပ်ပြီးသားပဲဗျ… လေးစားဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ”….
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့် ခွန်း ဒုတိယပိုင်း
၁၃ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀ ရန်ကုန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ
လုပ်သား ပြည်သူအပေါင်းကို ဖိတ်ကြားလိုက်ပါသည် ။
အားလုံးဘဲ တူတူညီရင် ကောင်းမယ် ။
အဲဒီတော့ မတွေ့ ရတာကြာပြီဆိုတော့ ပြောစရာတွေက အများကြီးဘဲ ။
ဒီမှာက အသံချဲ့ စက် မရှိတော့ အားလုံးလဲ ကြားရမှာ မဟုတ်ဖူးနော် ။
အားလုံးကြားချင်ရင် မနက်ဖန် ( ၁၄ နိူဝင်ဘာလ )ရုံးကိုလာခဲ့ 
အသံချဲ့ စက်နဲ့ ပြောမယ် ။
IFBNC 's Statement on DASSK Release
Posted by Mr Htay Tint at 6:29 AM0comments
၁၉၈၈ တုံးက ကျောင်းသားများရဲ
့ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲ ပြင်ဆင်မှုကို
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး
၈၈ တွေ နိူင်ငံတကာ အကူအညီ ရပ်သွားအောင်
နအဖက ရိုက်ချိုးခဲ့တယ် ။
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တော်လှန်စစ်ပွဲ တွေကိုလည်း
အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်တွေလို့ 
နအဖ ကဝါဒဖြန့် နိူင်ခဲ့တယ် ။
ခေါင်းဆောင်တွေ ကို ၂၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း
ပုဒ်မ အမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းထားတာ မလွတ်သေးဖူး ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် အန်ဂျီအို ပေါင်းစုံကိုလည်း
နအဖ ရဲ့ အကျပ်အတည်းတွေ ထွက်ပေါက် အတွက်
နအဖက မရှိသေးတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ဖမ်းခဲ့သူကို
ဥပဒေ ကတိတွေ အရ
ရက်စေ့လို့ ပြန်လွတ်ပေးမှာ မဟုတ်ပါဖူး
၂၀၁၀ အနိူင်ရ စစ်ကိုယ်စားလှယ်
အနိူင် စာရင်း ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို
ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားများ ကိုလျှော့ပါးသွားရန် ။
အကြမ်းဖက်စစ်ပွဲ အဖြစ် ကမ္ဘာကို ကြေညာရန် ။
စတဲ့ အချက်အလက်တွေ ပြည့်စုံရင်
အသုံးချ ထွက်ပေါက် အဖြစ် ယာယီလွတ်ပေးမှာပါ ။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့ အစည်းတွေ တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီ ။
နအဖ တပ်တွေ နယ်စပ်ဒေသကို
နအဖတပ်တွေ ရဲ့ အင်အားပြန့် ကျဲသွားနိုင်ပါတယ် ။
နအဖ ဘာကို ပြင်ဆင်ပြီး လုပ်နေတာလဲ ။
ကျွန်တော်တို့ ကကော ဘာတွေကို ပြင်ဆင်ရန်
ပြည်တွင်း ပြည်ပ နဲ့ နိူင်ငံတကာ အစိုးရတွေကို
ဘာတွေ အကူအညီတောင်းသင့်ပါသလဲ ။
၁၃ နိူဝင်ဘာလ ၂၀၁၀
Posted by Mr Htay Tint at 12:49 AM0comments
US ' Navy watch Burma from Thiland
မြန်မာ နိုင်ငံ ၏ ရွေးကောက်ပွဲလွန် ကာလ အခြေအနေများသည် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ ၏ လုံခြုံ
ရေး အတွက် ပါ စိုးရိမ် ဖွယ်ရာ ဖြစ်နေ သဖြင့် ထိုင်း ရေပိုင် နက် အတွင်း နှင့်တောင်တရုတ် ပင်လယ်
တွင် ရှိနေသော အမေရိကန် စစ်သင်္ဘော အချို့ သည် မြန်မာ ရေပိုင် နက် အနီးတွင် မကြာခဏ
ကင်းလှည့်ပြီး အသင့်အနေအထား ရှိနေတော့ မည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် မှအကြီး
တန်း အရာရှိ တစ်ဦးက Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
မြန်မာ စစ်တပ် နှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်များ အရေးသည် နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်
အသွင် ဆောင်သွား နိုင်ကာ ဆက်စပ်လျှက် ရှိသော နိုင်ငံများ ၏ လုံခြုံရေး ကိုပါ ထိပါး
နိုင်သည့် အခြေအနေရှိ သောကြောင့် အမေရိကန် ရေတပ်က နိုင်ငံရေပိုင် နက်တွင် ပုံမှန်
ကင်းလှည့်မှု ပြုပြီး အသင့် အနေအထား ဖြင့် အနီးကပ် စောင့်ကြည့် မည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာ နိုင်ငံ အရှေ့ တောင်ဘက်ခြမ်း တွင် ဖြစ်ပွားလျှက် ရှိသည့် လူမျိုးစု ဒေသန္တရ စစ်
ပွဲတွင် လက်နက် ကြီးများ ပစ်ခတ်မှု သည် အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ထဲ ထိပါကျရောက်လျှက်
ရှိကာ ဒုက္ခသည် များ အစုလိုက် အပြုံလိုက် ထွက်ပြေး ရမှု သည် ဆယ်စုနှစ် နှစ်စု အတွင်း
အိန္ဒိယ အရှေ့ ဘက်ခြမ်း အာရှ တွင် ပထမ ဦးဆုံး အကြိမ် ဖြစ်သည် ဟု ဥတပေါ လေဆိပ်
တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် သည့် အမေရိကန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်း တစ်ဦးက
Freedom News Group သို့ ပြောသည်။
တာဝေးပစ် ဒုံးကျဉ်များ ဖြင့် ပါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မည့် ရွှေမြွေဟောက် အမည်ရှိ
ပူးတွဲစစ်ရေး လေ့ကျင့် မှု တစ်ခုကို ထိုင်းနှင့် အမေရိကန် ပူးတွဲ၍ ထိုင်းပင်လယ်ပြင်တွင် စတင်
တော့မည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
ထိုင်း- ကန် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဥထိုင်းတော်ဝင်အမှတ် ၃ တပ်မတော်နဲ့ အမေရိကန်ကမ်း
တက်တပ်ဖွဲ့၈၄ တို့ ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
Posted by Mr Htay Tint at 2:30 PM0comments
တိုက်ပွဲသတင်းများ (၁၂ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀)
DKBA ဗိုလ်မှုးချုပ် စောလားပွယ် မှ ဖမ်းဆီးထားသည့်
ဗိုလ်ကြီး သက်နိုင်ကို ၁၀ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၀
နေ့ က ပြန်လည် လွှတ်ပေး လိုက်ပြီး
သူ့ ကို နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ က ဖမ်းဆီး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်ဦးစီးမှုး တတိယ တန်း အဖြစ် လည်း
တာဝန် ထမ်းဆောင် နေသူ အဆိုပါ ဗိုလ်ကြီးက
တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး ရေး သည် နိုင်ငံ အနာဂတ် အတွက်
အရေး ကြီး သည် ဟု သူ၏ ဆန္ဒသဘောထားကို
မြန်မာစံတော်ချိန်.....နံနက် ၁ နာရီ ၁၄ မိနစ် ----------------------------------------------------------------------
နံနက်(၁ နာရီ ၁၄ မိနစ်) ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား လွတ်ပေးရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ မကြာခင် ရုံးတက်မည်ဖြစ်ကြောင်း... (လောလောဆယ်တော့ ဒေါ်စုကို လွတ်ပေးမှု မရှိသေးကြောင်းကို ဦးဝင်းတင်မှ ပြောဆိုသည်။) ညနေလေးနာရီတွင် ဒေါ်စုအား လွှတ်ပေးမည်ဟု ထိုင်းတီဗွီတခုမှ သတင်းကြေညာသွားသည်။
Posted by Mr Htay Tint at 12:22 AM0comments
Karen National Union (KNU) Statement 11 Nov 2010
OFFICE OF THE SUPREME HEADQUARTER
The conflict in Myawaddy began on7November, the day of Burma’s first elections in 20 years, when civilians complained of being threatened and intimidated to vote for the junta-backed Union Solidarity and Development Party (USDP), rather than the local Karen party which was their preference. Brigade-5 of the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) led by Colonel Saw Lah Bwe – who refused to transform to the Border Guard Force under the control of SPDC Army – took control of Myawaddy to protect these people, without using weapons. Col Saw Lah Bwe had said that he expected the SPDC Army to enter into negotiation to resolve the situation.
However, on Monday, the 8th of November 2010, at9a.m., the SPDC Army responded with machine guns and rocket propelled grenades, despite the presence of many civilians in the town. Asaresult, more than 25,000 civilians fled across the border into Thailand. This is in addition to the estimated 500,000 people already displaced internally due to SPDC Army attacks. These attacks are all part of the SPDC’s policy of eliminating ethnic opposition, including ceasefire groups that have refused to be under its direct control asaBorder Guard Force, as required by their 2008 Constitution.
The SPDC has accused the KNU of carrying out these attacks. However, the KNU and DKBA Brigade-5 share the same policy not to hurt civilians but to protect them. The KNU supports the DKBA’s actions as they were taken in resistance to the SPDC’s elections that do not represent any progress towards creatingademocratic federal union in which the ethnic people’s fundamental human rights would be protected. Instead, the regime’s elections have created more conflicts, instability and caused further suffering of our ethnic peoples.
We have repeatedly warned that these elections will not solve the human rights and humanitarian crises in Burma, but instead result in continued or increased repression and instability, and attacks on ethnic peoples will continue.
We, the KNU, earnestly urge the United Nations, the E U, and other international communities to reject the result of Burma’s sham elections and apply real pressure on the regime to stop the attacks on ethnic civilians, and follow the demands of the United Nations to engage with all stake holders in tripartite dialogue for the resolution of all political problems.
Other Country history
တိုက်ပွဲဝင်နေသော ကရင် ရဲဘော်များကို ထောက်ပံ့ ကူညီလိုပါက အောက်ပါ အကောင့်သို့ ငွေလွဲခြင်းဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
Below is the bank information for the orgnization.
Account holder - Suwit Nareephachoerone
Account no. 382-0-76633-2
Branch - Mae Sot Branch
Tak Province , Mae Sot , Thailand
SWIFT Code ; BKKBK
ငွေလွှဲသည့်အခါ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ် နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးငွေရောက်မရောက်အတည်ပြုရန်လိုပါသည်။
Mobile: + 66 856511078 begin_of_the_skype_highlighting + 66 856511078 end_of_the_skype_highlighting
အထွေထွေအတွင်းရေးမှုးနှင့်ဆက်သွယ်မရပါက ကေအင်ယူ ဒုဥက္ကဌ ပဒိုဒေးဗစ်သကပေါ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Mr Htay Tint at 9:20 AM0comments
မြဝတီ ၈ နိူဝင်ဘာ ၂၀၁၀
နေ့ လည် ၁၂း၅၆
တိုက်ပွဲ ပြန်စ လက်နက်ကြီးသံများ ကြားနေရ
လူအများက နီးစပ်ရာ သောင်းရင်းမြစ်ကို ပြေးနေကြသည်။
မြန်မာ ဂိတ်များတွင် ကြံကြာနေပြီး လှေနဲ့ကူးနေကြတယ်။
လူအများက လက်နက်ကြီး ကျမှာကို ကြောက်နေကြသည်။
၁၂း ၁၃ သတင်း
နံနက် ၁၁ နညရီ ကျော်တွင် အပစ်ရပ်နေသည် ။
ရဲစခန်း ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ၂ လုံးကျ
ကလေးများကို ကျောင်းပြန်လွတ်ပြီး မြန်မာစစ်တပ်က စတင်ပစ်ခတ်သည်ဟု
တံတားထိပ် နားမှ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၂ ကျောင်း
မြဝတီဈေးကြီး အနေက်မြောက် ကြခတ်တော ဘုန်းကြီးကျောင်း
လူအများက အပြင်မထွက်ရဲကြပါ ။
အရပ်သား၎ ဦး ခန့် သေဆုံးသည်ဟု ပြောသံကြားရ
ကရင်တပ်မှ လိုက်လံသတိပေးနေသည် ။
အမှတ် ၃ ၄ ရပ်ကွက်ရှိ လူများကို ရပ်ကွတ်တွင်းမှ
လွတ်ရာသို့ပြေးခိုင်းနေသည် ။
လူအချို့ က ထိုင်းနိူင်ငံသို့ ပြေးနေကြသည် ။
Posted by Mr Htay Tint at 9:58 PM0comments
Idea of Burma Army
Soldier control army election in Burma.
ပြည်သူများမှ တိုင်းပြည်၏လိုအပ်ချက်များအ၇ မွေးဖွားလာခဲ့သည် ။
ဖက်ဆစ် ဂျပန်စစ်တပ်များကို မြန်မာပြည်မှ ဦးဆောင်ပြီး တိုက်ထုတ်ခဲ့သည် ။
နယ်ချဲ့ အဂ်လိပ်ထံမှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးစားခဲ့ သည် ။
လွတ်လပ်ရေး ရကာစ ကွဲပြားနေသော အတွေး အခေါ်များ အဖွဲ့ အစည်းများ အားလုံးကို
လက်နက်ကိုင်ဖြင့် အုပ်ချုပ်သူများ င်ြမ်းချမ်းအောင် ကာကွယ် ဆောင်ရွတ်ခဲ့သည် ။
တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်များ အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာခွဲဝေရေး အစည်းအဝေးများ အပြီးမသတ်နိုင်ဘဲ
လိပ်ခဲတင်းတင်းဖြစ်နေစဉ် ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တိုင်းပြည်ကို အာဏာသိမ်းခဲ့ရသည် ။
နယ်မြေခေါင်းဆောင်များ လူထု ကိုယ်စားလှယ်များ အများစုကို
နယ်မြေတည်တန့် ခိုင်မြဲရေး အတွက် စိတ်မကောင်းစွာ စတေးခဲ့ရသည် ။
သာယာသော ဆိုရှယ်လစ် လူ့ ဘောင်သစ်အတုကြီး ကို
တပ်မတော်မှ ဦးဆောင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် ။
တိုးတက်လာသော အပြည်ပြည် နိုင်ငံများ ကဲ့သို့ 
မြန်မာပြည်ကြီး ဒီမိူကရေစီ စနစ်ကျင့်သုံးပြီး တိုးတက်နိူင်ရန်
၁၉၈၈ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ တွင် အာဏာသိမ်းခဲ့သည် ။
တပ်မတော် အစိုးရ ဖွဲ့ စည်းပြီး ကွဲပြားနေသော လူမျိုးစု
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်များ အားလုံးကို
လှို့ ဝှက် စီမံချက်များဖြင့် စစ်တပ်နှင့် တရားဝင် အုပ်ချုပ်ရေးအတုပေးပြီး
ယာယီ မြန်မာပြည် ငြိမ်းချမ်းရေး ပေးခဲ့သည်။
၁၉၄၈ မတိုင် ခင်မှစတင်ပြီး၂၀၁၀ ရောက်သည်အထိ
နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးစားတည်ဆောက်ခဲ့ရသည် ။
ဒီပဲရင်း လုပ်ကြံမှုကို ဖြေရှင်းရန်
မြန်မာထွက်ကုန်များ တရုပ်မှတဆင့် တရားဝင်တင်ပို့ ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက် များအရ
သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးများသော တပ်မတော်သားများ သာလျှင်
တိုင်းပြည်ကို ဆက်လက်အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်း ရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည် ။
ထို ယုံကြည်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်
ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့် ကျင်သူမှန်သမျှ ထောင်ချ ။
ပြည်သူ့ အင်အားမှန်သမျှ တပ်မတော် ရန်သူဟု သတ်မှတ်ကြ ။
ပြည်သူ့ ပါတီ မှန်သမျှ ဝါးစိမ်းတုတ်နဲ့ရိုက်ဖျက်ကြ ။
ပြည်သူတွေကို ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသူ တပ်မတော်ရန်သူ ။
ထားရာနေ စေရာသွား တဲ့ကျွန်ဆိုတာ
အတိတ်ဘဝက မြန်မာတွေ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့။
တိုင်းပြည်မှာ လူသတ်ခွင့် ကြာခိုခွင့် အပျိုစဉ်ကို မုဒိန်းကျင့်ခွင့်တွေက
အယင်ဘဝက ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ ။
တပ်မတော်သား မပါရှိသော အဖွဲ့ အစည်းများ အားလုံး
မြန်မာပြည်တွင် တရားဝင် မရှိစေရ ။
ဒီမိုကရေစီသည် တပ်မတော်မှ အလည်အလပ် စစ်သည်တော်များ
စစ်ဗိုလ်များ အတွက်သာဖြစ်သည် ။
မဲပေးခြင်းဟာ လူယုတ်မာတွေ တရားဝင်ဘို့ 
- - - - -Joint Statement - - - - - Ifbnc,Onsob,Nl...
View Weekly News SPDC's Post Election (22 Nov 2010...